Apple waxay kireysatay Fuliye Digniin Waqti-hore u ah Kooxda iCloud Kooxda | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan helnaa wararka dhaqdhaqaaqa ee aagga sharafta leh ee madaxda Apple. Sida laga soo xigtay The Wall Street Journal, Apple ayaa hadda heshay adeegyadii fuliyahii hore ee Time Warner Cable, Peter adag, in Hadda wuxuu ka mid noqon doonaa kooxda adeegga daruuraha.
Stern ayaa kooxdaas ka maamuli doona booskiisa cusub ee Madaxweyne kuxigeenka, si toos ah uga warbixinaya maamulahaaga iTunes ka sarreeya, Eddy Cue oo caan ah.
Inta lagu gudajiray sanadadiisii ​​shaqada madaxa Time Warner Cable, Stern wuxuu kujiray wadahadal lala yeeshay shirkada Californian ku saabsan heshiis suurtagal ah oo u dhexeeya labada shirkadood oo si wada jir ah ugu fidiya adeegga telefishanka Apple TV. Si kastaba ha noqotee, heshiiska noocan oo kale ah weligiis lama soo saarin, sababo la xiriira dhibaatooyin ay Apple la lahayd kuwa soo saara waxyaabaha ku jira
Sannadihii uu ku jiray ka mid noqoshada shirkadda Apple, Peter ugu adeegay istiraatiijiyad iyo doorar horumarineed heer shirkadeed oo sare, maaddaama ay kaqeybgale ahayd isku dayo badan oo hanasho ah sannadihii la soo dhaafay.
Dhawaan, Stern waxay gacan ka geysatay hirgelinta istiraatiijiyad diiradda lagu saaray adeegga macaamiisha, oo gacan ka geysanaya hagaajinta diiwaangelinta ay shirkaddu heshay sanadkii la soo dhaafay, ka dib ku dhowaad toban sano oo khasaaro ah.
Wuxuu ka tagay booskiisa shirkadda fiilada horraantii sanadkan, kuna beegan la wareegida heshiiska Charter Communications.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, Stern waa a aftahan codkar ah oo meesha ka saaraya qalab badan oo ay bixiyeen shirkadaha fiilooyinka. Wuxu qabaa, inay bixiyeyaasha maaddooyinka dhijitaalka ahi "u furnaadaan" inay bixiyaan kanaallada TV-ga loo qoondeeyay, iyagoo la jaanqaadaya hadba macaamilka iyo dalabka ama codsiyada ay adeegsadaan, ee aaladaha kala duwan.
Aniga oo tixgelinayna waayo aragnimadiisa balaaran ee dhanka maqalka, Stern waxay Eddy Cue ka caawin kartaa wada-xaajoodyada heshiisyada wada-shaqeynta la shirkadaha shirkadaha qaybta adeegga telefishanka ee mustaqbalka. Adeegyadan waxaa sidoo kale ku jiri lahaa Apple Music, iTunes, iyo alaabooyin kale oo saldhigoodu yahay iCloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay kireysataa Ex-Warner Cable fuliyaha kooxdeeda iCloud